Khilaaf Xoogan oo soo kala dhaxgalay Dowladda KMG ah iyo Kooxda Sheegata Ahlusuna kadib markii Xilal loo diiday. | Halganka Online
Khilaaf Xoogan oo soo kala dhaxgalay Dowladda KMG ah iyo Kooxda Sheegata Ahlusuna kadib markii Xilal loo diiday.
Golaha Camalka Islaamka ayaa shaaca ka qaaday in uu jiro khilaaf xoogan oo u dhexeeyo Maleeshiyaadka qabuura Galeenka iyo dowlada KMG ah kaas oo ku salaysan xilalka ay labada dhinac kala qaadanayaan.
Sheykh Dayib Mursal oo maanta lahadlay saxaafada magaalada Muqdisho ayaa sheegay in qabuura galeenka iyo DKMG ah ay ka midaysanyihiin caqiidada oo kaliya balse ay isku haystaan Kuraasta.
DKMG ah iyo Ururka qabuura galeenka ayaa la sheegay in ay isku mari la’yihiin [censored]iirada lasiinayo kooxda Ahlusuna lamagac baxday ee qabuuraha caabudo, Shariif Sheykh Axmed ayaa ka Gows adaygay in [censored]iiro lasiiyo Kooxda Ahlusuna sheegata halka Cumar Cabdi Rashiid uu arrinkaas taageersanyahay.
“Shacabka waxaan u sheegaynaa in Riddada iyo Mushrikiinta ay isku haystaan Kuraas xaqiiqdu waxay tahay in labada dhinac ay kamidaysanyihiin caqiidada laakin waxay isku haystaa Kuraasta”ayuu yiri Sheykh Dayib.
Wadaadkan katirsan Golaha Camalka Islaamka ayaa carrabka ku adkeeyay in Shariif Sheykh Axmed uu ka didsanyahay in lasoo dhaweysto kooxdan Ahlusuna labaxday oo hadii ay jagooyin hesho meesha ka saari karto Kursigiisa.
“waxaan ogaanay in Shariifku uu ka shakisanyahay Mushrikiinta kale wuxuu ogyahay in hadii uu kooxdaas soo dhaweysto ay kuraasta ka qaadi karaan caalamkana uusan ka dhaadhicin karin waa Argagaxiso laakin shabaab iyo Xisbul islaam caalamka way ka yeelayaan waa Argagaxiso”.
Khilaafka u dhexeeya labada dhinac ayaa laga dareemayaa madaxtooyada Villa Somaliya oo la sheegay in ay Mas’uuliyiinta DKMG ah ay isku maan dhaafsanyihiin xilalka lasiin karo qabuura galeenka.
Kooxda qabuura galeenka ah ayaa ka caraysan aamusnaantii ay DKMG ah ka aamustay qabuura Burburtii ay xarakada shabaabul Mujaahidiin dhawaan ka samaysay degmooyinak Gobalka Banaadir.
Qabuura Galeenka iyo DKMG ah ayaa bishii maarso Heshiis ku saxiixday magaalada Addis Ababa dalka Itoobiya kaas oo dhigayay in 1-da Bisha April kooxdaasi lasiiyo 5wasiir Saraakiil Ciidan iyo safiiro taasi oo meesha ka baxday.
« Ganacsatada degmada Walaweyn oo balan qaaday in ay bixinayaan Hubka iyo dhaqaalaha kale ee ku baxaya Ciidanka Xisbada Wilaayada Saliibiyiinta AMISOM oo Madaafiic ku garaacay shacabka muslimka xaafado ka mid ah Magaalada Muqdisho »